यी हुन् किरात राई समुदायबाट प्रथम महिला पाइलट साहारा चाम्लिङ ! - Nepal Insider
उदयपुर लिम्चुम्बुङ गाउँपालिका – ४ बलम्ता स्थायी घर भएकी साहारा चाम्लिङ राई किराँत राई समुदायबाट प्रथम महिला पाईलट हुन्। साहाराले अहिले ब्यवसायिक उडान गर्न थालेकी छिन् ।
उनी यती एयरलाइन्स को पाईलट बनेकी हुन् । साहाराले फिलिपिन्सबाट तीन वर्षसम्म पाइलटको ट्रेनिङ लिएकी हुन् । उनी समाजसेवी ज्ञान राईकी छोरी हुन् । ज्ञान राई किरात राई यायोक्खाका उपाध्यक्ष समेत हुन् ।
सामाजिक कार्यमा क्रियाशील रहँदै राईले आफ्नो छोरीको सपना पुरा भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । सामाजिक कार्यको सिलसिलामा उदयपुर–काठमाडौं गरिरहने ज्ञान राई परिवार काठमाडौंको अनामनगरस्थित घट्टेकुलोमा बसोबास गर्छन् ।
Previous काफल खानुको फाइदै फाइदा ! पहाडी जंगलमा सित्तैमा पाइने काफलका हेर्नुस औषधीय गुणहरू
Next पदको दुरुपयोग: सेनाको हेलिकोप्टरमा श्रीमती लिएर मन्दिर दर्शनमा रक्षा सचिव रश्मिराज पाण्डे !